Avoahay koa ny “vérité de salaire” e - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Tsy quoi ny fampiharana ny vérité de prix izany e…”, hoy ity olona iray tao anaty taksibe tao Antananarivo. Toa olona tezitra ny fandrenesana ny feony no feo mananihany ihany koa. “Tsy quoi izany”, hoy izy namerina ny teniny. Nisy nihomehy ireo olona manodidina azy.
Valin-kafatra ho an’ny Minisitry ny solika io teniny io. Valin-kafatra tsy ho ren’ilay Ministra mihitsy fa filazana tsy aritra ny azy ary manamaivana ny alahelony. Tsiahivina fa nanambara ny ministra fa tsy maintsy ho ampiharina ny “vérité de prix” eo amin’ny vidin-tsolika. Tsy nambaran’ity manam-pahefana ity kosa hoe ohatrinona no hiakaran’ny vidin’ny solika raha hampiharina tokoa izany “vérité de prix” izany.
Nanaitra ny olona maro ny filazana ity fampiharana ny “vérité de prix” ity. Nahoana no minisitra efa mamarana ny fotoana hiasany no manambara an’izany fampiakarana izany ? Mandamina ny saim-bahoaka sahady ve ? Manamora ny lalana ho an’ny minisitra vaovao ? Mamarana ny fotoam-piasany tokoa ny mpikambana ao amin’ny governemanta ankehitriny. Efa isan’andro no handrenesana ny ankisisika amin’ny fanendrena ny ho praiminisitra. Efa tsy ho ela koa ny fivoriana voalohany ho an’ny Antenimieram-pirenena izay ahitana ny endriky ny fifandanjan-kery politika misy ankehitriny.
“Tsy quoi izany fampiharana ny vérité de prix izany ho’aho”, hoy ilay ranamana. Nanamafy ny heviny izy. Rehefa nisy nanaitra azy fa hiakatra avy hatrany daholo anie ny vidim-piainana, hiakatra anie ny saran-dalana e dia nilaza izy fa “tsy quoi izany”. “Tsy adala aho, ary tsy mpanan-karena”, hoy izy. “Matoa andeha taksibe tahaka anareo izao dia isan’ny olona sahirana ihany ny tenako” hoy izy nanazava. Nanazava izy fa matoa izy milaza fa tsy quoi ny fampiharana ny vérité de prix dia satria mino izy fa tsy hipetra-potsiny ny vahoaka. “Hijoro ny mpiasa ka hitaky ny vérité de salaire, hitsangana ny mpandray pension ka hitaky ny fampanarahana ny raisiny miaraka amin’izany vérité de prix izany”, hoy ity ranamana ity. Nambara taminy fa marefo ny sendika izay tsy mahazaka vahoaka hidina an-dalambe hitaky izany vérité de salaire izany. Ny mpanao politika dia ny tombontsoan’izy ireo no mahamay azy fa tsy ny an’ny vahoaka izany. Manantena kosa Ranamana fa tsy ilaina mpanentana ny fijoroana hitaky izany vérité de salaire izany.
Nofinofy ny an’izy Ranamana ity. Mbola manantena ny famoronana filet de sécurité Ranamana. Efa nisy izany. Azo haverina. Tsy ny conditionnalité an-dry zareo mpamatsy vola ihany no tsy maintsy tanterahina fa mila arovana ny tombontsoan’ny vahoaka ka tsy maintsy hajoro miaraka amin’ny conditionnalités an-dry zareo mpamatsy vola ny conditionnalités an’ireo vahoaka maro an’isa.
Tsara ny manantena fa hahatsapa tena ny mpiasa ka hitaky ny vérité de salaire fa mila tairina dieny izao tokoa ireo mpiasa ireo mpiaro ny zon’ny mpiasa (sendika…) ireo mpiaro ny zon’olombelona sy ny zon’ny mpanjifa sy ny sisa. Mandrangaranga ny azy ireo vahiny. Ndao. Mitsangana. Mijoroa. Hasehoy koa fa misy ireo vonona hiaro ny tombontsoan’ny vahoaka sy ny kitapom-bolan’i Neny.
Raha misy tokoa izany manda izany dia marina ilay nambaran’ilay Ranamana fa “tsy quoi izany fampiharana ny vérité de prix izany”. Inona izany fiarovana izany : vérité de salaire ve ? filet de sécurité ve ? Anjaran’ny governemanta manaiky ny mampihatra ilay vérité de prix no mamorona izay fanefitra miaraka amin’io vérité de prix eo anivon’ny vidin-tsolika io.